Warshadaha haysta Kaarka Silicone ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Dadka haysta kaarka taleefanka silikoonku waa shay ku habboon dallacsiinta, bixinta, xayaysiinta, qurxinta iyo wixii la mid ah. Iyada oo cajaladaha dhejiska ee 3M ay ku dheggan yihiin dhinaca dambe, kuwa haysta kaarka silikoonku waa raagayaan in la isticmaalo muddo dheer, xoog ku filan oo aan si sahal ah u dhicin. Cabbirro kala duwan ayaa ku habboon in lagu dhejiyo qaabab kala duwan oo taleefannada gacanta ah oo ka socda magacyo caan ka ah adduunka oo dhan, si ay si fiican u haystaan ​​kaararka amaahda, kaararka aqoonsiga, kaararka dhibcaha, kaararka rasiidka lacagta ah, kaararka gaadiidka, kaararka amniga, kaararka VIP, tigidhada, lacag caddaan ah, taleefoonka dhegaha, fiilooyinka xogta iwm.
Dadka haysta kaarka taleefanka silikoonwaa shay kaamil ah dallacsiinta, bixinta, xayaysiinta, qurxinta iyo wixii la mid ah. Iyada oo cajaladaha dhejiska ee 3M ay ku dheggan yihiin dhinaca dambe, kuwa haysta kaarka silikoonku waa raagayaan in la isticmaalo muddo dheer, xoog ku filan oo aan si sahal ah u dhicin. Cabbirro kala duwan ayaa ku habboon in lagu dhejiyo qaabab kala duwan oo taleefannada gacanta ah oo ka socda magacyo caan ka ah adduunka oo dhan, si ay si fiican u haystaan ​​kaararka amaahda, kaararka aqoonsiga, kaararka dhibcaha, kaararka rasiidka lacagta ah, kaararka gaadiidka, kaararka amniga, kaararka VIP, tigidhada, lacag caddaan ah, taleefoonka dhegaha, fiilooyinka xogta iwm.
Lacagta caaryada ah waa u bilaash naqshadahayagii hore, naqshadaha macaamiishana waa la soo dhaweynayaa. Hawlaha kale ee dheeraadka ah waxaa lagu gaari karaa ku lifaaqan sida tirtiraha shaashadda micro fiber, bacaha badan oo loogu talagalay 2 kaar ama kuwa haysta, dhejiska ama kuwa kale.
Qalabka: Silicone iyo kuwa kale
Naqshadaha iyo cabbirka: Lacag caaryada oo lacag la'aan ah ayaa loogu talagalay naqshadeena jira, naqshado la habeeyay
waa la soo dhaweynayaa.
Logos: Logos -ka waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, waxaa lagu dejin karaa midab midab leh
Lifaaq: 3M cajalad dhejis ah iyo kuwo kale
Hore: Coasters Silikoon
Xiga: Silsiladaha Cable Silicone
Qofka haysta Kaarka Taleefanka gacanta
Telefoonka gacanta ee haysta Kaarka Amaahda
Haysta Kaarka Amaahda Telefoon
Qofka Kaarka Taleefanka haysta
dadka haysta kaarka taleefanka
Qofka haysta Kaarka Silikoon ee Taleefanka
Dadka haysta kaarka taleefanka silikoon